Radio daljir oo qalab isboorti gudoonsiisay qaar kooxaha Isboortiga ee gobolka Galgaduud (Sawirro) – Radio Daljir
Oktoobar 5, 2013 12:59 g 0
Caabudwaaq, October 5, 2013 – Waxaa manta Magaalada Caabudwaaq Ee Gobolka Galgaduud ka dhacday munaasabad lagu gudoonsiinayey qalab sports qaar ka mid ah Degmooyinka Gobolka Galgaduud.
Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen masuuliyiinta Radio Daljir Ee Magaalada Caabudwaaq ayey qalab sports ku wareejiyeen Degmooyinka Cabudwaaq.
dhuusamareeb, Guriceel, Balanballe, Xeraale Iyo dhabad kaasi oo ahaa Banooniyaal loogu talo galay dhalinyarada sports-ka ee ka dhisan magaalooyinkaas iyo sidoo kale naadiyada ka dhisan Magaalada
Caabudwaaq iyo qaar ka mid ah Schoolada.
Munaasabadan ayaa waxaa? ka soo qayab galay madax ka kala socotay Degmooyinka iyo martis sharaf kale oo lagu casuusmay waxaana halkaasi? ugu horayn ka hadlay Agaasimaha Radio Daljir Caabudwaaq Muxyadiin Cabdi Geele oo ka warbixieyy cida soo gaarsiisay qalabkan sports iyo halka ay ka yimaadeen isagoo sheegay in qalabkan sports uu yahay mid ay si wada jir ah uga yimid Hay?adaha One World Project Iyo DLC Daljir kuwaas oo ugu talay galay in ay ku hormariyaan kuna dhiiri galiyaan bahda sports Gobolka Galgaduud maadaama sports-ku yahay is dhexgalka Bulshada.
Sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay Madaxa waxbarashada ee Degmada Caabbudwaaq Liibaan Daahir Xaashi oo uga mahad celiyey Hay?adaha One World Project Iyo DLC qalabkan sports oo ay soo gaarsiiyey Maamulada Sports ee Gobolka Galgaduud isagoo sheegay in ay tahay horumar dhinaca
sports-ka ah waxaana uu ku dhiiri galiyey in ay halkaas kasii wadaan .
Masuuliyiintii ka socotay Degmooyinka Gobolk ayaa si wada jir ah ugu mahad Celiyey Hay?adaha One World Projecta Iyo DLC waxaana ay sheegeen in? ay tahay markii ugu horaysay ee tiro banooniyaal ah ay gobolka yimaadaan loona qaybiyo Bahada sports-ka Gobolka Galgaduud.
Faaduma Caanood iyo Nuura Xasan Cowl oo ka socday Ururka Haweenka Degmada Caabudwaaq ayaa iyaguna ka hadlay munaasabada lagu gudoonsiiyey Qalabka Sports-ka Degmooyinka Gobolka waxaana ay amaan u soo jeediyey Bahda radio daljir oo ay sheegeen in ay deegaanka waxbadan horumarkiisa ka shaqeeyaan .
Ugu danbayntiina waxaa hadalo kooban ka jeediyey xaghayaha Degmada Caabudwaaq Ee Dowlada Federalka Soomaaliya Daahir Maxamed Xiris Waxaana uu Aman u soo jeediye marka hore Radio Daljir iyo Qalabkan? sports ee manata ay soo gaarsiiyeen bahda sports-ka isagoo sheegay in cidkasta oo ka shaqaynaysa horumarka bulshada ay la shaqeeynayaa.
Daawo xaruunta tababarka daljir DLC iyo qalabka ay bixisay.